Ny Pixel Watch an'ny Google dia tsy hatsangana amin'ity taona ity | Androidsis
Volana vitsivitsy lasa izay dia nipoaka ny vaovao, Google dia miasa amin'ny smartwatch voalohany. Fitaovana iray izay naseho ny anarany avy eo ary ho Pixel Watch. Ny tsaho momba ity famantaranandro marika ity dia be dia be. Na dia mbola tsy hitantsika aza ny endriny ary tsy fantatra izao ny mombamomba azy. Ny hany zavatra nohajaina fotsiny dia ny hidona amin'ny tsena amin'ny Google Pixel.
Raha iray amin'ireo izay nieritreritra izany ianao, dia manana vaovao ratsy izahay. Araka ny Ny drafitr'i Google dia tsy mandalo amin'ny fandefasana an'io Pixel Watch eny an-tsena io, amin'izao fotoana izao. Ity smartwatch voalohany an'ny marika ity dia tsy hahita ny mazava amin'ny taona 2018.
Iray amin'ireo injenieran'ny Wear OS izay tompon'andraikitra tamin'ny famoahana izany vaovao izany. Toa izany, ny orinasa dia tsy mikasa ny handefa ity famantaranandro ity eny an-tsena amin'ny taona 2018. Na dia tsy nisy daty nomena aza dia azo inoana fa hiandry ny taona manaraka isika.
Fa maninona no tsy hisy ny Pixel Watch amin'ny taona 2018? Toa mazava ny tena anton'izany. Google dia te-hampifantoka ny ezaka ataony amin'ny fampidirana fanatsarana amin'ny Wear OS. Ny rafitra fandidiana dia nampidirina tamin'ny fiandohan'ity taona ity ho toy ny fomba iray hanatanterahana famantaranandro.
Na dia somary miadana aza ny fandrosoany. Noho izany, natolotray ny tranga IFA 2018 ny kinova fanavaozana ny Wear OS, miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy amin'ny endriny. Ary fanatsarana bebe kokoa no antenaina amin'ny faran'ity taona ity. Ka tsy misy fotoana hanombohana ity Pixel Watch ity.
Tsy fantatra amin'izao fotoana izao izay hitranga amin'ny fanombohana ny Pixel Watch. Azo inoana fa amin'ny taona ho avy ity famantaranandro ity dia tena hisy, saingy tsy nilaza na inona na inona momba an'io ny orinasa hatreto. Farafaharatsiny mba efa fantatsika fa tena izy io. Fa amin'izao fotoana izao, ny laharam-pahamehan'ny orinasa dia ny Wear OS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Tsy hamoaka ny Pixel Watch i Google amin'ity taona ity